संक्रमित वा संक्रमणमुक्त भएकाले कोरोना खोप कहिले लगाउने ? « Mero LifeStyle
मुख्य स्टोरी अतिथि कलम अन्तर्वार्ता विकेण्ड
योग/फिटनेस डाक्टर नभएमा हेल्थ विशेष हाउ टु लिभ लंगर
न्यूज फिचर फोटोसुट गसिप
इन्टेरियर केयर स्विट होम विशेष
समाज समाचार अजिव दुनियाँ टिप्स अफ दि डे
© 2021 Mero LifeStyle
योग/फिटनेस डाक्टर नभएमा विशेष हाउ टु लिभ लंगर
न्यूज फिचर फोटोकथा गसिप
बैंकले बढाए ब्याजदर, कुनको कति ?
हल खुल्यो तर, फिल्म चलाउन तयार छैनन् निर्माता
यी हुन् प्यारालाइसिस हुनुको कारण, कसरी बच्ने ?
यस्तो छ विश्वकर्मा पूजाको महत्व, कसरी गर्ने पूजा ?
दशैंलाई नयाँ नोट असोज ४ देखि, एकजनाले कतिसम्म साट्न पाइन्छ…
कोरोना अपडेट : १,५११ सङ्क्रमित थपिए, १,६८९ जना निको
नारायणमान बिजुक्छेले भोगेको संसद– ‘जहाँ दलालहरुको हालिमुहाली चल्छ’
‘बाटो छैन, स्याउ बजारमा कसरी पुर्याउने ?’
यस्ता व्यक्तिमा कोरोनाको जोखिम कायमै !
संक्रमित वा संक्रमणमुक्त भएकाले कोरोना खोप कहिले लगाउने ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 21 May, 2021
यतिबेला नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ को दोस्रो डोज लगाउने क्रम जारी छ । भेरोसेल तथा कोभिसिल्ड को पहिलो मात्रा लगाएका कतिपय मानिसहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
त्यसो त कोरोना संक्रमित र संक्रमणमुक्त भएकाले भेरोसेल अर्थात अन्य कोरोनाको खोप लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? वा संक्रमण मुक्त भएको कति समयपछि खोप लगाउनु पर्छ ? भन्ने बारे आममानिस अन्योलमा छन् । यसैबारे प्रष्ट हुन ह्याम्स अस्पतालकी कन्सल्टेन्ट फिजिसियन सुरभी पाण्डेको सुझाव यस्तो छ :
सक्रिय संक्रमितले कोरोना खोप लगाउनु हुँदैन ?
सक्रिय संक्रमितले कोरोनाको कुनैपनि खोप लगाउनु हुँदैन । अहिलेको खोपमा मरिसकेको कोरोना भाइरसलाई राखिएको हुन्छ । त्यही लगाउने हो । त्यसले शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउन मद्धत गर्छ । एक्टिभ इन्फेक्सन भइरहेको बेलामा एन्टिबडी विकास भइरहेको हुन्छ । यस्तो बेलामा खोप दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले सक्रिय संक्रमितले खोप लगाउनु हुँदैन ।
कोरोना निको भएको २ हप्ता भित्र खोप लगाउने
कोरोना संक्रमित निको भएपछि जति सक्दो छिटो लगाउँदा राम्रो हुन्छ । सिडिसीको गाइडलाइन अनुसार कोरोना संक्रमण निको भएपछि लगाउनु राम्रो मानिएको छ ।
खोप लगाएकाहरु कतिको सुरक्षित ?
अहिलेको खोपहरु ७९ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी छन् । २ वटा खोप लगाइसकेका मानिसमा १ महिनापछि एन्टिबडी विकास भएको देखिन्छ । त्यस कारण कोभिड लागे पनि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, निमोनिया भएर अक्सिजन चाहिने, आइसियू वा भेन्टिलेटरमा लगेर उपचार गर्नुपर्न अवस्था एकदमै कम छ । अझै खोप लगाएका कतिपयलाई त कोभिडको लक्षण पनि देखिएको छैन ।
प्लाज्मा लिएकाले ९० दिनपछि खोप लगाउने
यदि कोही बिरामीले प्लाज्मा लिएर कोरोना संक्रमण निको भएको छ भने उनीहरुले ९० दिन अर्थात ३ महिनापछि मात्र कोभिड भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ । किनभने तीन महिनासम्म उनीहरुको शरीरमा एन्टिबडी विकास भइरहेको हुन्छ । त्यतिबेला खोप लगाउनु र नलगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
‘अब पनि हेलचेक्रयाइँ गरे अर्को महामारीले सताउँछ’
मुटुका बिरामी घरमै कसरी सुरक्षित रहने ?
कोरोनाको प्रभाव घटेसँगै बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिन थालेपछि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन् । शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अधिकांश बैंकले ब्याजदर
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै काठमाडौंसहित देशभरका चलचित्र हलहरु बन्द भए । करिव ५ महिना बन्द भएका हलहरु काठमाडौं
सामान्यतया मस्तिष्कमा अचानक रक्तसञ्चार बन्द हुनु र दिमागमा भएका रक्तकोषिका फुटेर रगत बग्नुलाई स्ट्रोक अर्थात् पक्षघात भनिन्छ । पक्षघात हुँदा
डा.वासुदेव कृष्ण शास्त्री हरेक चाड–पर्वको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छ । हरेक पर्व मनाउनुको पछाडि त्यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिकसँगै वैज्ञानिक
‘जीवनकै पहिलो अवार्डले उर्जा थपेको छ’
गायक राम रखालको ‘मायाको झझल्को’ सार्वजनिक
फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न के–के कुरामा ध्यान दिने ?
यस्तो छ विश्वकर्मा पूजाको महत्व, कसरी गर्ने पूजा
दशैंलाई नयाँ नोट असोज ४ देखि, एकजनाले कतिसम्म साट्न पाइन्छ ?
यस्तो छ थारू समुदायले मनाउने ‘अट्वारी पर्व’ को महिमा, कसरी मनाउँछन् ?
फोन नं.: +977015909487
विज्ञापनका लागि सम्पर्क: [email protected] (00977-1-5909487)
© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित Mero LifeStyle